✔️✔️ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ ? ၁ ဦး (ကျား) BE (Civil) (သို့) AGTI (Civil) Construction နှင့် M & E အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်အထက် ရှိရပါမည်။ လုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာ M.S Office ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ပြီး၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နိုင်သူ၊ အစီရင်ခံစာ စနစ်တကျ ကောင်းမွန်စွာရေးသားနိုင်သူဖြစ်ပြီး လက်အောက်၀န်ထမ်း များကို ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ အသက် (၄၀) နှစ်အထက် ဖြစ်ရမည်။ ✔️✔️ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိ/ လက်ထောက် အမှုဆောင်အရာရှိ (HြှM) ?၁ ဦး ကျား/မ (သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့) Hြှ နှင့်ပတ်သက်သော Diploma, Certificate လက်မှတ်ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ Hြှ နယ်ပယ် တွင်လုုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။ Hြှ နှင့်ပတ်သက်သော Process များ၊ ကုမ်ပဏီဥပဒေ၊ အလုပ်သမားဥပဒေ၊ ၀န်ထမ်းရေးရာ အငြင်းပွားမှုများကို ပြေလည်စွာဖြေရှင်း ပေးနိုင်ရမည်။ အသက် (၃၀) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာ စာစီ၊ စာရိုက် (မြန်မာ၊ အဂငျ်လိပ်) ကၽွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ✔️✔️ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိ (ICT) ? ၁ ဦး (ကျား) B.C.Sc (သို့) ဘွဲ့ရ IT နှင့်သက်ဆိုင် သော Diploma လက်မှတ်ရရှိသူ IT နယ်ပယ်တွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်အထက် ရှိသူဦးစားပေးမည်။ Computer Hardware & Software, Network ပိုင်းကိုကၽွမ်းကျင်စွာဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်၍ အဂငျ်လိပ်စာ အခြေခံတတ်ကၽွမ်းရမည်။ ရုံးလုပ်ငန်း အခြေခံတတ်ကၽွမ်းပြီး အသက် (၄၅) နှစ် အထက် ဖြစ်ရမည်။ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ ကြီးကြပ် အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်၍ အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ ✔️✔️ ဦးစီးအရာရှိ/ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၃ (Pြှ/IြှD) ? ၂ ဦး (ကျား) (Public ြှelations, Journalism, Com- munications (သို့) သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့ မီဒီယာ၊ Pြှ နှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ (စီးပွားရေး က႑နှင့်သက်ဆိုင်သော အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦးစားပေးမည်။) တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် နှင့် ဒီဇိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာကၽွမ်းကျင်မှုရှိသူ၊ တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Social Media များနှင့် Online နည်းပညာများကို ကၽွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်တတ်ကၽွမ်းသူဦးစားပေးပါမည်။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတကြွယ်ဝ၍ မြန်မာစာနှင့် အဂငျ်လိပ် စာရေးသားပြောဆိုနိုင်ပြီး လိုအပ်လျှင် အချိန်ပိုဆင်း ပေးနိုင်ရပါမည်။ ✔️✔️ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၂/၃ (ICT) ? ၁ ဦး (ကျား) သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့ IT နှင့်သက်ဆိုင် သော လက်မှတ်ရရှိသူ
✔️✔️ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ ? ၁ ဦး (ကျား) BE (Civil) (သို့) AGTI (Civil) Construction နှင့် M & E အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်အထက် ရှိရပါမည်။ လုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာ M.S Office ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ပြီး၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်နိုင်သူ၊ အစီရင်ခံစာ စနစ်တကျ ကောင်းမွန်စွာရေးသားနိုင်သူဖြစ်ပြီး လက်အောက်၀န်ထမ်း များကို ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ အသက် (၄၀) နှစ်အထက် ဖြစ်ရမည်။ ✔️✔️ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိ/ လက်ထောက် အမှုဆောင်အရာရှိ (HြှM) ?၁ ဦး ကျား/မ (သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့) Hြှ နှင့်ပတ်သက်သော Diploma, Certificate လက်မှတ်ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ Hြှ နယ်ပယ် တွင်လုုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။ Hြှ နှင့်ပတ်သက်သော Process များ၊ ကုမ်ပဏီဥပဒေ၊ အလုပ်သမားဥပဒေ၊ ၀န်ထမ်းရေးရာ အငြင်းပွားမှုများကို ပြေလည်စွာဖြေရှင်း ပေးနိုင်ရမည်။ အသက် (၃၀) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ ကွန်ပျူတာ စာစီ၊ စာရိုက် (မြန်မာ၊ အဂငျ်လိပ်) ကၽွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ✔️✔️ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိ (ICT) ? ၁ ဦး (ကျား) B.C.Sc (သို့) ဘွဲ့ရ IT နှင့်သက်ဆိုင် သော Diploma လက်မှတ်ရရှိသူ IT နယ်ပယ်တွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်အထက် ရှိသူဦးစားပေးမည်။ Computer Hardware & Software, Network ပိုင်းကိုကၽွမ်းကျင်စွာဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်၍ အဂငျ်လိပ်စာ အခြေခံတတ်ကၽွမ်းရမည်။ ရုံးလုပ်ငန်း အခြေခံတတ်ကၽွမ်းပြီး အသက် (၄၅) နှစ် အထက် ဖြစ်ရမည်။ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လက်အောက်ဝန်ထမ်းများကို ကောင်းမွန်စွာ ကြီးကြပ် အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်၍ အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ ✔️✔️ ဦးစီးအရာရှိ/ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၃ (Pြှ/IြှD) ? ၂ ဦး (ကျား) (Public ြှelations, Journalism, Com- munications (သို့) သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့ မီဒီယာ၊ Pြှ နှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိရမည်။ (စီးပွားရေး က႑နှင့်သက်ဆိုင်သော အတွေ့အကြုံရှိသူများကို ဦးစားပေးမည်။) တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် နှင့် ဒီဇိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာကၽွမ်းကျင်မှုရှိသူ၊ တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Social Media များနှင့် Online နည်းပညာများကို ကၽွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်တတ်ကၽွမ်းသူဦးစားပေးပါမည်။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ဗဟုသုတကြွယ်ဝ၍ မြန်မာစာနှင့် အဂငျ်လိပ် စာရေးသားပြောဆိုနိုင်ပြီး လိုအပ်လျှင် အချိန်ပိုဆင်း ပေးနိုင်ရပါမည်။ ✔️✔️ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၂/၃ (ICT) ? ၁ ဦး (ကျား) သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့ IT နှင့်သက်ဆိုင် သော လက်မှတ်ရရှိသူ IT လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရပါမည်။ Computer Hardware & Software, Network ပိုင်းကို နားလည်တတ်ကၽွမ်းပြင်ဆင်နိုင်သူဖြစ်၍ အဂငျ်လိပ်စာအခြေခံ တတ်ကၽွမ်းရပါမည်။ အများနှင့်အဆင်ပြေစွာပြောဆိုဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ စာစီ၊ စာရိုက် တတ်ကၽွမ်းရပါမည်။ လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းပေးနိုင်ရပါမည်။ ✔️✔️ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၃ ? ၃ ဦး (ကျား/မ) (သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့) လုပ်ငန်းတာ၀န်သိတတ်၍ ချမှတ်ထားသော ရုံးတွင်းစည်းကမ်းများကို တိကျစွာလိုက်နာနိုင်ပြီး လူအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ပြီး Computer ကၽွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်၍၊ ရုံးလုပ်ငန်းအခြေခံသဘောတရားများကို နားလည်သူဖြစ်ရပါမည်။ ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းစဉျများကို စိတ်၀င်စားပြီး ကြီးကြပ်သူအရာရှိများအား ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ ✔️✔️ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၂ ? ၂ ဦး (မ) (သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့) အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိရပါမည်။ ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစဉျများကို စိတ်၀င်စား၍ အထက်အရာရှိများအား ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ ❗️(မှတ်ချက်။ ။ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၂/၃ ရာထူးအတွက် လှျောက်ထားသူများသည် အသက် (၃၀) နှစ်ထက်မကျော်စေရပါ။)❗️ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UMFCCI) တွင် ဖော်ပြပါရာထူးများဖြင့် ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူလျက်ရှိရာ စိတ်ပါဝင်စားသူများ လှျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လှျောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အသင်းချုပ်၏ သတ်မှတ်လှျောက်လှှာပုံစံနှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်ရေး လှျောက်လှှာတစ်စောင်၊ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ်တူ၊ ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်း (သက်တမ်းတစ်လအတွင်း)၊ ပညာအရည်အချင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ သက်တမ်းရှိအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ်တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ်တူတို့နှင့်အတူ Information ဌာနစိတ် သို့ ? (၁.၃.၂၀၁၉) ? ရက်် နောက်ဆုံးထား၍ လှျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက HြှM ဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်☎️၀၉၄၅၀၂၀၀၂၉၀၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ (လိုင်းခွဲ-၃၁၈) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်
IT လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရပါမည်။ Computer Hardware & Software, Network ပိုင်းကို နားလည်တတ်ကၽွမ်းပြင်ဆင်နိုင်သူဖြစ်၍ အဂငျ်လိပ်စာအခြေခံ တတ်ကၽွမ်းရပါမည်။ အများနှင့်အဆင်ပြေစွာပြောဆိုဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာ စာစီ၊ စာရိုက် တတ်ကၽွမ်းရပါမည်။ လိုအပ်ပါက အချိန်ပိုဆင်းပေးနိုင်ရပါမည်။ ✔️✔️ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၃ ? ၃
ဦး (ကျား/မ) (သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့) လုပ်ငန်းတာ၀န်သိတတ်၍ ချမှတ်ထားသော ရုံးတွင်းစည်းကမ်းများကို တိကျစွာလိုက်နာနိုင်ပြီး လူအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်၊ သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ပြီး Computer ကၽွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်၍၊ ရုံးလုပ်ငန်းအခြေခံသဘောတရားများကို နားလည်သူဖြစ်ရပါမည်။ ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းစဉျများကို စိတ်၀င်စားပြီး ကြီးကြပ်သူအရာရှိများအား ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမည်။ ✔️✔️ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၂ ? ၂ ဦး (မ) (သင့်လျော်သည့်ဘွဲ့) အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်ရှိရပါမည်။ ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစဉျများကို စိတ်၀င်စား၍ အထက်အရာရှိများအား ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ ❗️(မှတ်ချက်။ ။ ဝန်ထမ်းအဆင့်-၂/၃ ရာထူးအတွက် လှျောက်ထားသူများသည် အသက် (၃၀) နှစ်ထက်မကျော်စေရပါ။)❗️ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UMFCCI) တွင် ဖော်ပြပါရာထူးများဖြင့် ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူလျက်ရှိရာ စိတ်ပါဝင်စားသူများ လှျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လှျောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် အသင်းချုပ်၏ သတ်မှတ်လှျောက်လှှာပုံစံနှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်ရေး လှျောက်လှှာတစ်စောင်၊ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ်တူ၊ ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းထောက်ခံစာမူရင်း (သက်တမ်းတစ်လအတွင်း)၊ ပညာအရည်အချင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ သက်တမ်းရှိအလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ်တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ်တူတို့နှင့်အတူ Information ဌာနစိတ် သို့ ? (၁.၃.၂၀၁၉) ? ရက်် နောက်ဆုံးထား၍ လှျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက HြှM ဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်☎️၀၉၄၅၀၂၀၀၂၉၀၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ (လိုင်းခွဲ-၃၁၈) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်